NJ Marijuana - Fahatokisana rongony any New Jersey | Fahazoan-dàlana marijuana NJ
New Jersey dia hifidy amin'ny marijuana ampiasain'ny olon-dehibe amin'ity volana novambra ity! Izany no mety ho endrik'ilay tsenan'ny marijuana NJ raha mandalo ny fepetra. Lalàna mitombo marijuana NJ.
NJ Marijuana | Legalization cannabis any New Jersey
Rongony NJ Ny fanarahan-dalàna dia mety hitarika ny hetsika ara-dalàna ao amin'ny faritry ny fanjakana. Miaraka amin'i New York sy Pennsylvania miasa amin'ny tetik'ady cannabis, ny morontsiraka atsinanana dia nahita hetsika ara-dalàna vitsivitsy tsy ho ela. New Jerseyans dia hifidy amin'ny cannabis fialamboly amin'ity volana novambra sy fitsapan-kevitra vao haingana nanolo-kevitra ny 68% amin'ny New Jerseyans mankasitraka ny fiadiana amin'ny fampiasana olon-dehibe. Ny governemantan'i New Jersey dia niantso ny fanarahana ara-dalàna ny cannabis a "No-brainer" aorian'ny fihoaran'ny toe-karena avy amin'ny coronavirus. Ny mpisolovava cannabis New Jersey, Jessica F. Gonzalez, dia nanatevin-daharana anay mba hiresaka momba ny endriky ny tsenan'ny cannabis ao amin'ny NJ raha lasa ny fepetra.
Henoy ny PodCast anay Vaovao ara-dalàna cannabis na Jereo ny lohatenin'ny YouTube mitondra ny lohateny NJ Marijuana | Legalization cannabis any New Jersey raha misy fampahalalana mifandraika.
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fanokafana ny ivotoerana iray any Pennsylvania
FIVAVAHANA MISY: Pennsylvania-Mampiasa lalàna momba ny valan'ady
Fanitsiana ara-dalàna an'i New Jersey
New Jersey dia eo am-pandehanana ara-dalàna ny fampiasana olon-tsakafo matavy. Amin'ny faha-3 Novambra 2020, ny mpifidy dia hanapa-kevitra ny fanitsiana ny lalàm-panorenan'ny fanjakana New Jersey mba hanara-dalàna ny fialam-boly ny cannabis ho an'ny olon-dehibe ho 21 taona na mihoatra, anisan'izany ny fanarahan-dalàna ny fambolena, ny fanodinana ary ny fivarotana varotra.
Liana amin'ny tanjona manokana na ny orinasanao ve ianao? Ireto no mila fantatrao momba an'io lalàna io.
FAMPITANIANA FAMPISORIANA NY FIVORIANA MARINAJIANA
Manaiky ve ianao amin'ny fanitsiana ny Lalàm-panorenana hamoronana lalàna iray mifehy rongony rongony antsoina hoe "cannabis"?
Ny olon-dehibe raha kely indrindra 21 taona farafahakeliny dia afaka mampiasa otrikaina. Ny vaomiera vaomiera noforonina mba hanara-maso ny fandaharan'asam-pahasalamana momba ny fitsaboana amin'ny fanjakana dia hiandraikitra ny tsenan'ny cannabis vaovao.
Ny vokatra cannabis dia iharan'ny vidin'ny hetra amin'ny varotra. Raha manam-pahefana amin'ny alàlan'ny Antenimiera, ny kaominina dia afaka mandefa ôrdônansy eo an-toerana handoa hetra eo an-toerana amin'ny vokatra rongony.
Hanomboka ny 1 Janoary 2021. ny fanitsiana Departemantan'ny fahasalamana manara-maso ny tsenan'ny marijuana ara-pitsaboana any New Jersey ary ny tsena vaovao rongony fampiasan'ny olon-dehibe any NJ dia ho hitan'ny komisiona mifehy ny rongony raha vao tafapetraka ny komisiona.
Ity fanavaozana ity dia manome alàlana ny lalàna mifehy rongony rongony antsoina hoe "cannabis." Ny olona 21 taona farafahakeliny no afaka mampiasa vokatra fatran-tsakafo ara-dalàna.
Ny komisiona mifehy ny rongony dia manara-maso ny tsenan'ny rongony vaovao. Ity komisiona ity dia noforonina tamin'ny taona2019 hanaraha-maso ny programa rongony ara-pitsaboana an'ny fanjakana. Ny haben'ny fahefana vaovaon'ny vaomiera dia hojerena amin'ny lalàna napetraky ny mpanao lalàna.
Ny mpivarotra vokatra cannabis rehetra amin'ny tsenan'ny cannabis vaovao dia ampidirina amin'ny hetra amin'ny varotra amin'ny varotra. Raha manam-pahefana amin'ny alàlan'ny Antenimiera, ny kaominina dia afaka mandefa ôrdônansy eo an-toerana handoa hetra eo an-toerana amin'ny vokatra rongony.
New Law Laws
Misy lalàna ara-dalàna any New Jersey ve?
Ny lalàna momba ny marijuana dia manome toerana ho an'ny programa rongony ara-pitsaboana saingy indrisy, anisan'izany i New Jersey fanjakana telo voalohany ho an'ny fisamborana rongony. Araka ny filazan'ny NORML, na iza na iza manana 50 grama na latsaka dia mety hiatrika famonjana mandritra ny 6 volana ary hiatrika onitra $ 1,000 XNUMX.
Fetran'ny fihoaram-pefy any New Jersey
Ny lalàna mifehy ny rongony NJ amin'izao fotoana izao dia tsy mamela ny fananana otrikaina fialamboly. Ny fepetra fandatsaham-bato dia tsy misy mamaritra voafaritra momba ny fetran'ny tompona. Midika izany fa raha vao ankatoavina ilay fanitsiana dia tsy maintsy apetraka ny lalàna sy ny lalàna fanampiny. Toy izany koa ny fitsipiky ny fitomboan'ny trano sy ny fitsinjarana ny varotra.
Ny hetra Vaovao amin'ny Marijuana vaovao
Ny haba haba marijuana NJ, raha toa ka lany ny fanitsiana, dia hampiharina amin'ny 6.625% ny hetra amin'ny varotra ataon'ny fanjakana amin'ny rongony fialamboly, voarara ny haba amin'ny hetra fanampiny. Na izany aza, ny governemanta eo an-toerana dia mahazo alalana hamoaka hetra fanampiny amin'ny varotra hatramin'ny 2% amin'ny rongony fialamboly.
Asio ny andininy faha-IV, Fizarana VII amin'ny fampidirana paragrafy vaovao 13 mba ho vakiana manaraka:
Ny fitomboana, ny fambolena, ny fanamboarana, ny fanamboarana, ny fanamboarana, ny famonosana, ny fandefasana, ary ny fividianana ny varotra sy ny fanjifana, dia ireo vokatra noforonina, na tafiditra ao anaty valan-jaza, amin'ny olona 21 taona na mihoatra, ary tsy avy amin'ny olona latsaky ny 21 taona , dia ho ara-dalàna ary eken'ny fitsipiky ny vaomiera mifehy ny cannabis noforonin'ny PL2019, c.153 (C.24: 6I-5.1 et al.), na izay nifandimby tamin'io vaomiera io.
(1) Ny fahefana mifehy ny vaomiera na ny mpandimby ny siansa momba ny fihenan-dalàna ara-dalàna dia omena alàlana amin'ny alàlan'ny lalàna ampiharina amin'ny lalàna.
(2) Ny fahazoan-dàlana amin'ny fividianana rongony na vokatra novokarina na tafiditra ao anatiny dia tafiditra ao amin'ny hetra ampiharina amin'ny lalàna "Sales and Use Tax", PL1966, c.30 (C.54: 32B-1 et seq.), izay novaina sy natambatra, na lalàna hafa manaraka aorian'izany; Na izany aza, na izany aza, ny kaominina iray, alohan'ny fanomezan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny lalàna nomen'ny Lehiben'ny Fitsarana, dia afaka misafidy didim-pitsarana hametraka hetra monisipaly fanampiny amin'ny fivarotana, na endrika hafa hamindrana, anana na vokatra noforonina avy ao ary tafiditra ao amin'ny "cannabis" fety iray miorina amin'ny kaominina. Ny tahan'ny hetra monisipaly dia tsy tokony hihoatra ny roa isan-jaton'ny fidiram-bola avy amina fivarotana cannabis na vokatra noforonina na izay ahitàna fongana avy amin'ny antoko nahazo alalana na ny sandany mitovy aminy avy amin'ny endrika hafa namindrana fety iray.
Araka ny nampiasaina tamin'ity andalana ity:
Ny "cannabis" dia midika hoe ny ampahany rehetra amin'ny zava-maniry ao anaty tanimbary Genus Cannabis L., na mitombo na tsia, ny voany ary ny sombin-javatra rehetra, famokarana, sira, derivative, fifangaroana, na fanomanana ny zavamaniry na voany. Ny "cannabis" dia tsy misy: famonoana otrikaretina ary fihinany noho ny antony ara-pitsaboana arakaraka ny lalàna nopetran'ny mpanao lalàna; ny vokatra hemp na hempo izay mifehy ny fitsipika eo ambanin'ny "New Jersey Hemp Fambolena," PL2019, c.238 (C.4: 28-6 et al.), na izay nandimby azy nanao izany; na cannabis tsy voalahatra, antsoina hoe rongony, ary vokatra noforonina avy ao na misy marijuana.
Raha ekena ity farany fanitsiana ny lalàmpanorenana ity amin'ny alàlan'ny Article IX, andalana 1 ao amin'ny Lalàm-panorenana, dia hatolotra ny vahoaka amin'ny fifidianana manaraka manaraka hitranga mihoatra ny telo volana aorian'ny fifanarahana farany ary havoaka farafaharatsiny indray mandeha ao amin'ny gazety iray farafahakeliny iray isaky ny distrika notendren'ny filohan'ny Antenimierandoholona, ​​ny Lehiben'ny Fihaonambe sy ny Sekreteram-panjakana, tsy latsaky ny telo volana talohan'ny fifidianana ankapobeny.
Ity volavolan-dalàna fanitsiana ny lalàmpanorenana ity dia apetraka amin'ny vahoaka amin'ny fifidianana sy endrika manaraka ireto:
Hisy atao pirinty amin'ny bileta ofisialy tsirairay ampiasaina amin'ny fifidianana ankapobeny:
Isaky ny kaominaly izay tsy ampiasaina ny milina mifidy dia angano iray izay tokony hanao mialoha ilay fanontaniana hoe:
Raha tianao ilay sosokevitra vita pirinty etsy ambany, manaova lakroa (X), miampy (+), na zahao () eo amin'ny kianja mifanohitra amin'ilay teny hoe “Eny.” Raha manohitra izany ianao dia manaova lakroa (X), miampy (+) na manamarina () eo amin'ny kianja mifanohitra amin'ny teny hoe "Tsia"
Raha mahaliana anao ianao dia indreto ny lahatsoratra ofisialy of the Fanitsiana ara-dalàna an'i New Jersey.
Nahaliana anao ny ho tonga vahiny? Mandefasa mailaka ny mpamokatra izahay [email voaaro].
Tags:Fifidianana 2020, bressler, mpisolovava indostrian'ny cannabis, Legalization cannabis any New Jersey, vaovao momba ny fanarahan-dalàna rongony, vaovaon'ny rongony, Jessica F. Gonzalez, Miggy420, marijuana jersey vaovao, New Law Laws, NJ rongony, NJ Marijuana, NJ Marijuana | Fahatokisana rongony any New Jersey - Lalànan'ny ahitra New Jersey - Fanomezana ara-dalàna ny ahitra, NJ Marijuana New Jersey, Marijuana ara-pitsaboana NJ, NJ Weed, Lalànan'ny tsimparifary NJ, fanamarinana ara-dalàna ny tsimparifary, tom howard, vaovao ahitra